ⓘ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း (ဇီဝဗေဒ)
စနစ်တကျ လေ့လာမှုများ phylogeny ကနှစ်လိုဖွယ်ရှိသော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အဖြစ်စာရင်းဝင် taxonomy ၏ပိုအားလုံးပါဝင်နိုင်သောလယ်၏အခွဲခြားနှင့်အမည်များသို့ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါတယ်တဲ့ပုံစံပေးဖို့"
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကိုမျိုးစိတ်များအဖြစ်စုစည်းခြင်း၊ မျိုးစိတ်များကိုကြီးမားသောအုပ်စုများဖွဲ့ခြင်းနှင့်ထိုအုပ်စုများကိုနာမည်ပေးခြင်းပေးခြင်း၏သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်သည်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဖော်ပြချက်, ဖော်ထုတ်ခြင်း, nomenclature နှင့်ခွဲခြားလွှမ်းခြုံသောသိပ္ပံနယ်ပယ် နှင့် စနစ်ကျ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း
စနစ်များ - "သက်ရှိများ၏အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ၎င်းတို့၏သဘာဝဆက်နွယ်မှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့် taxa များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းအပါအဝင်သက်ရှိများ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
taxonomy အပါအဝင်အသုံးအနှုန်းများတစ်ပြင်လုံးကို set ကို စနစ်တကျဇီဝဗေဒ, စနစ်တကျ, biosystematics, သိပ္ပံနည်းကျခွဲခြား, ဇီဝဗေဒခွဲခြားနှင့် phylogenetics အနည်းငယ်ကွဲပြားတစ်ခါတစ်ရံ, တခါတရံတူညီပေမယ့်အမြဲ related နှင့်ပျထှေးသော - အချိန်များတွင်အဓိပ္ပါယ်များထပ်ရတယ်။ "taxonomy" ၏အကျယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကိုဤနေရာတွင်အသုံးပြုထားသည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းကို ၁၈၁၃ တွင် de Candolle ၏ Théorieélémentaire de la botanique တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
taxa အထူးသဖြင့်မျိုးစိတ်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်းနှင့်အမည်ပေးခြင်း၏စည်းကမ်းကိုရည်ညွှန်းရန် alpha taxonomy ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုယနေ့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အစောပိုင်းစာပေများတွင်အသုံးအနှုန်းသည် ၁၉ ရာစုအကုန်အထိ morphological taxonomy နှင့်သုတေသနထုတ်ကုန်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဝီလျံဘာထရန် Turrill သည် "alpha taxonomy" ဟူသောဝေါဟာရကို ၁၉၃၅ နှင့် ၁၉၃၇ တွင်ထုတ်ဝေသောစာတမ်းများတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
. taxonomists များအကြားသူတို့၏ပြproblemsနာများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်များမှစဉ်းစားရန်၊ သူတို့၏ cytological, ecological နှင့် genetics လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုစုံစမ်းရန်နှင့်သူတို့၏ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်နည်းလမ်းများသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ Turrill 1935 ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော taxonomy အဟောင်းကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပေါ် အခြေခံ၍ လက်ခံခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အဆင်ပြေစွာသတ်မှတ်ထားသော "alpha" ကို အခြေခံ၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တည်ဆောက်ထားသည့်ဝေးလံသောဝေးလံခေါင်သီသောစနစ်ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အပိုင်းခွဲ၊ မျိုးစိတ်နှင့်အခြား taxonomic အုပ်စုများ၏အပြုအမူနှင့်သွယ်ဝိုက်။ သက်ဆိုင်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနှင့်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်နေရာကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ စံနမူနာကောင်းများကိုမည်သည့်အခါကမျှလုံးဝအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်သူအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ကြီးမားသောတန်ဖိုးရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် "အိုမီဂါ" taxonomy ၏အချို့သော၊ မရေရာသည့်စံပြစံနှုန်းရှိလျှင်ဂရိအက္ခရာကိုအနည်းငယ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲကအချို့သည်ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် "beta" ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုခံယူနေသည်ဟုထင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် Turrill သည် alpha taxonomy မှဂေဟဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒ၊ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် cytology စသည့် taxonomy များတွင်ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးကိုအတိအလင်းချန်လှပ်ထားသည်။ သူသည် phylogenetic ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကို alpha taxonomy စစ။ မှထပ်မံချန်လှပ်ထားသည်။ 365-366) ။ နောက်ပိုင်းတွင်စာရေးသူများအနေဖြင့်တိကျသောအဓိပ္ပာယ်ကို သုံး၍ မျိုးစိတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း မျိုးကွဲများသို့မဟုတ်အခြားရာထူးများအရ taxa များမပါ ကို အသုံးပြု၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်နည်းစနစ်များကို သုံး၍ ခေတ်မီကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် Ernst Mayr က beta taxonomy ကိုမျိုးစိတ်များထက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
မျိုးကွဲများ၏ဇီဝဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆက်စပ်မျိုးစိတ်များ၏အုပ်စုများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇာစ်မြစ်ကိုနားလည်ခြင်းသည် taxonomic လုပ်ဆောင်မှု၏ဒုတိယအဆင့်၊ မျိုးစိတ်များကိုဆွေမျိုးသားချင်းများ "taxa" အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းအတွက်အစီအစဉ်များအတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအမျိုးအစားများ။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှုဟူသောဝေါဟာရကိုခွဲခြားရည်ညွှန်းသည်အရာဖြစ်တယ်, ၎င်းကို "beta taxonomy" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
taxonomic သမိုင်း၏ဖော်ပြချက်အချို့သည်ရှေးခေတ်ယဉ်ကျေးမှုများသို့ taxonomy ကိုသတ်မှတ်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်း ၁၈ ရာစုအထိသက်ရှိများကိုခွဲခြားရန်သိပ္ပံနည်းကျအမှန်တကယ်ကြိုးပမ်းမှုမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။ အစောပိုင်းအလုပ်များသည်အဓိကအားဖြင့်ဖော်ပြရန်ဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆေးပညာတွင်အသုံးဝင်သောအပင်များကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဒီသိပ္ပံနည်းကျစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှာအဆင့်များစွာရှိပါတယ်။ အစောပိုင်း taxonomy သည် Linnaeus ၏လိင်ခွဲခြားမှုစနစ်အပါအ ၀ င် "အတုစနစ်များ" ဟုခေါ်သောမတရားသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် de Jussieu 1789, de Candolle 1813 နှင့် Bentham and Hooker 1862–1863 ကဲ့သို့သောသဘာဝစနစ်များဟုရည်ညွှန်းသော taxa ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုမိုပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်စနစ်များနောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားစဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အကြိုခဲ့ကြသည်။ ချားလ်စ်ဒါဝင်၏ မျိုးစိတ်များ၏မူလအစ ၁၈၅၉ ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆက်နွယ်မှုကို အခြေခံ၍ ခွဲခြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားရန်နည်းလမ်းအသစ်များရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၈၈၃ မှ စ၍ phyletic systems ၏အယူအဆဖြစ်သည်။ ဤနည်းကို Eichler ၁၈၈၃ နှင့် Engler ၁၈၈၆ - ၁၈၉၂ တို့မှအမျိုးအစားခွဲခဲ့သည်။ မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များပေါ်ပေါက်လာမှုက မျက်မှောက်ခေတ် သင်္ချာ ဘာသာရပ် ထက်မဟုတ်ဘဲ Cladistics အပေါ် အခြေခံ၍ Phylogenetic systems ၏ခေတ်သစ်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါကာလအတွင်း Renaissance, ထို အကြောင်းရင်း၏အသက်အရွယ်, နှင့်ဉာဏ်အလင်း, သက်ရှိပိုပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည် categorizing, နှင့် taxonomic အကျင့်ကိုကျင့်ရှေးဟောင်းကျမ်းအစားထိုးရည်မှန်းချက်ကြီးအလုံအလောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းကိုခေတ်မီဆန်းပြားသည့်မှန်ဘီလူးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရံဖန်ရံခါအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သက်ရှိများ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကျစွာလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာတိုးတက်မှု၏အားသာချက်ကိုရယူရန်အစောဆုံးစာရေးဆရာများထဲမှတစ်ခုမှာ "ပထမဆုံး taxonomist" ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သောအီတလီဆရာဝန် Andrea Cesalpino 1519-1603 ဖြစ်သည်။ သူ၏ Magnum opus De Plantis သည် ၁၅၈၃ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးအပင်မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ကျော်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူပထမ ဦး ဆုံးအသိအမှတ်ပြုခဲ့သောကြီးမားသောအပင်မိသားစု ၂ ခု Asteraceae နှင့် Brassicaceae ကိုယနေ့တိုင်အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၁၇ ရာစုတွင် ဂျွန် ရေး အင်္ဂလန် ၊ ၁၆၂၇ - ၁၇၀၅ သည်အရေးကြီးသော taxonomic ဆိုင်ရာအလုပ်များကိုရေးသားခဲ့သည်။ သူ၏အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုမှာ Methodus Plantarum Nova ၁၆၈၂ ဖြစ်ပြီးသူသည်အပင်မျိုးစိတ် ၁၈၀၀၀ ကျော်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုအခြိနျတှငျသူ၏အခွားအတနျးမြားသညျအခကျအခဲမြားတှငျအထကျအနကျဆုံးဖွဈသျောလညျးအခွခေံပညာရှင်တဈ ဦး ကမှထုတ်လုပ်ခဲ့သညျ၊ လာမည့်အဓိကအခွန် ဘဏ္onomicာရေးဆိုင်ရာ အလုပ်များကို ဂျိုးဇက်ပစ်တွန်ဒီ Tournefort ပြင်သစ်၊ ၁၆၅၆-၁၇၀၈ မှထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၇၀၀ မှသူ၏ Institutiones Rei Herbariae တွင် ၆၉၈ မျိုးဆက်မှမျိုးစိတ်ပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် Linnaeus ကိုတိုက်ရိုက်ဩဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဆွီဒင်ရုက္ခဗေဒပညာရှင် Carl Linnaeus ၁၇၀၇-၁၇၇၈ သည် taxonomy ခေတ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူ့အဓိကအကျင့်နှင့် Systema Naturae 1735 ခုနှစ် 1st Edition ကို, မျိုးစိတ်သစ် Plantarum 1753 ခုနှစ်, နှင့် Systema Naturae 10th Edition ကို, သူခေတ်သစ် taxonomy တော်လှန်ခြင်း။ အမှုတော်တို့ကိုတိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်မျိုးစိတ်တစ်ခုစံဒွိစုံအမည်ပေးခြင်းစနစ်, အကောင်အထည်ဖော် တစ်ဦးဖရိုဖရဲနဲ့ disorganized taxonomic စာပေမှတစ်ကြော့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သက်သေပြရာ။ သူကလူတန်းစား၊ အမိန့်၊ မျိုးစိတ်, ဒါပေမယ့်လည်းပန်းပွင့်၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြု။ အားဖြင့်, သူ့စာအုပ်ကနေအပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် Linnaean system ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၈ ရာစု၌ယနေ့ခေတ်တွင်ယနေ့တိုင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန် taxonomists များက Linnaeus ၏အလုပ်သည်မှန်ကန်သောအမည်များအတွက်" ၁၇၃၃ နှင့် ၁၇၅၈ အသီးသီး” အတွက်" စမှတ်” အဖြစ်မှတ်ယူကြသည်။ ဤရက်စွဲများမတိုင်မီထုတ်ဝေသောအမည်များကို "pre-Linnaean" ဟုညွှန်းပြီးမှန်ကန်မှုမရှိဟုသတ်မှတ်သည် Svenska Spindlar တွင်ထုတ်ဝေသောပင့်ကူများ မှလွဲ၍ ။ ဤရက်စွဲများမတိုင်မီ Linnaeus ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသည့် taxonomic အမည်များကိုပင် Linnaean မတိုင်မီထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ taxonomy သည် ဇီဝဗေဒ ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်အားထက်သန်သော သဘာဝသမား များသည် taxa အသစ်များထုတ်ဝေရာတွင်မကြာခဏပါဝင်လေ့ရှိသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့် "taxonomists" ဟုသိကြသောဇီဝဗေဒပညာရှင်များကလေ့ကျင့်ကြသည်။ taxonomy သည် ဘဝကို ဖော်ပြရန်နှင့်စုစည်းရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့် taxonomists မှလုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ နှင့်ရရှိလာမည့် ထိန်းသိမ်းရေးဇီဝဗေဒ နယ်ပယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
taxon ၏ "အဓိပ္ပါယ်" ကို၎င်း၏ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်၎င်း၏ရောဂါသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် encapsulated ဖြစ်ပါတယ်။ taxa ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိပါ။ သို့သော် taxa အသစ်များကိုအမည်ပေးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသတ်မှတ်သည်။ ခုနှစ်တွင် သတ္တဗေဒ, အ nomenclature ပိုမိုလေ့အသုံးပြုရာထူး များအတွက် superfamily မှ subspecies, ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် သတ္တဗေဒ Nomenclature အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ICZN Code ကို ။ ဒနယ်ပယ်များတွင် ရုက္ခဗေဒ, phycology နှင့် mycology, taxa ၏အမည်ကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည် ရေညှိ, မှိုများနှင့်အပင်များအတွက် Nomenclature အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ICN ။
နာမည်သည်ထူးခြားရမည် ဆိုလိုသည်မှာ homonym မဟုတ်ပါ
အဆိုပါ taxon လက်တင်အက္ခရာ က၏ 26 အက္ခရာများပေါ်တွင် အခြေခံ. အမည်ပေးထားရမည်ဖြစ်သည် ဒွိစုံ မျိုးစိတ်အသစ်အဘို့, သို့မဟုတ်အခြားရာထူးများအတွက် uninomial ။
ဤပထမလိုအပ်ချက် ၄ ခုသည်ထာဝရသိပ္ပံဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အခွန်ကောက်ခံမှုကိုဖော်ပြရန် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် သို့မဟုတ်အခြားအငှားယာဉ်များနှင့်ခွဲခြားရန်သင့်လျော်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်သောထုတ်ပြန်ချက်များပါ ၀ င်သင့်သည် ရောဂါ၊ ICZN Code ၊ အပိုဒ် ၁၃.၁.၁၊ ICN ၊ အပိုဒ် ၃၈ ။ ကုဒ်နှစ်မျိုးလုံးသည်တက္ကစီ ယင်း၏အ ကန့်အသတ် ရှိသည့်အကြောင်းအရာကို၎င်း၏အမည်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းမှတမင်တကာသီးခြားခွဲထုတ်သည်။
ဖော်ပြချက်သည်အနည်းဆုံးအမည်ပါသည့် အမျိုးအစား နမူနာတစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံရမည်။
"အခွင့်အာဏာ" သိပ္ပံနည်းကျနာမကိုအမှီပြီးနောက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ အခွင့်အာဏာသည်သိပ္ပံပညာရှင်သို့မဟုတ်အမည်ကိုပထမဆုံးတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သောသိပ္ပံပညာရှင်များ၏အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၇၅၈ ခုနှစ်တွင် Linnaeus သည် အာရှဆင် အား Elephas maximus အားသိပ္ပံပညာကိုပေးခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင် Elephas maximus Linnaeus, 1758 ဟုရေးသားခဲ့သည်။ စာရေးသူများ၏အမည်များကိုမကြာခဏအတိုကောက် အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ Linnaeus အတွက် L. အတိုကောက်ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသည်။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်တွင်စံသတ်မှတ်ထားသောအတိုကောက်အမျိုးအစားများရှိသည် စာရေးသူအတိုကောက်အားဖြင့်ရုက္ခဗေဒပညာရှင်စာရင်းကို ကြည့် ပါ ။ အာဏာပိုင်များကိုသတ်မှတ်ပေးသောစနစ်သည် ရုက္ခဗေဒ နှင့် သတ္တဗေဒ အကြားအနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ သို့သော်မျိုးစိတ်တစ်ခု၏ genus သည်မူလဖော်ပြချက်မှ စ၍ ပြောင်းလဲသွားပါကမူလအခွင့်အာဏာ၏အမည်ကိုကွင်းကွင်း၌နေရာချသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် taximetrics, သို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်း taxonomy အဖြစ်လူသိများ phenetics အတွက်, သက်ရှိမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ phylogeny သို့မဟုတ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆက်ဆံရေး၏, ခြုံငုံတူညီအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားထားပါသည်။ ဒါဟာ taxa အကြားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် "အကွာအဝေး" ၏အတိုင်းအတာအတွက်ရလဒ်။ Phenetic နည်းလမ်းများသည်မျက်မှောက်ခေတ်တွင်အတော်လေးရှားပါးလာသည်။ များသောအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အစားထိုးခြင်း၊ phenetic နည်းလမ်းများသည်ဘုံဘိုးဘွား သို့မဟုတ် plesiomorphic စရိုက်များကိုဘုံ သို့မဟုတ် apomorphic အသစ်များမှခွဲခြားခြင်းမပြုပါ။ သို့သော် အိမ်နီးချင်းပူးပေါင်းခြင်း ကဲ့သို့သောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာနည်းစနစ်အချို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များ ထိုကဲ့သို့သော Bayesian အခြ ကဲ့သို့သော သည်အလွန်မြင့်မားသောတွက်ချက်မှုများပြားသည့်အခါ phylogeny ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကြမ်းဖျင်းတွက်ချက်မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။